Ego Ole Ka Infographics Na-efu? (Na otu esi echekwa $ 1000) | Martech Zone
Sunday, Jenụwarị 10, 2016 Mọnde, Jenụwarị 11, 2016 Douglas Karr
Enweghị izu na-aga nke na anyị enweghị infographic na mpaghara nke ọ bụla nke nrụpụta ya DK New Media. Ndi otu anyi choro na acho isiokwu puru iche nke enwere ike iji tinye aka na ahia ahia nke ndi ahia anyi. Otu nyocha anyi na achikota ihe omuma ohuru nke di na Intanet. Onye na-ede akụkọ anyị na-ede akụkọ gburugburu echiche anyị na-abịa. Ndị na-emepụta anyị na-arụ ọrụ iji mepụta akụkọ ndị ahụ na anya.
Ulo oru ndi na edeputa #infographics nwere 12% onu ahia kariri
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-ere ahịa ọdịnaya na-eche na infographic na-ejedebe ọtụtụ data na ọnụ ọgụgụ gbasara ihe enyere. Ugh… we see these over the web and fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ịkekọrịta ha belụsọ na e nwere ihe na-akpali akpali gbara ọkpụrụkpụ banyere ụfọdụ stats hụrụ. Anyị kwenyere na infographic ziri ezi na-akọ akụkọ dị mgbagwoju anya, na-ahụ anya na-enye nkwado na-akwado, kachasị maka ikiri na saịtị na ngwaọrụ dị iche iche, ma na-ejedebe na oku na-akpali oku iji mee ka onye na-ekiri ya mee mkpebi.
Olee ihe ndị na-emetụta Ọnụ Ahịa Infographic?
Enwere ọtụtụ ọrụ na-arụ ọrụ na ozi ọ bụla anyị mepụtara, mana anyị ka na-akwụ ụgwọ nke ọma ma e jiri ya tụnyere ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Infographics nwere ike ịdị iche na ịnye ọnụahịa n'ọtụtụ ebe - site na narị ole na ole dollar maka imewe, na iri puku kwuru iri puku maka nrụpụta zuru ezu, nkwalite na ịkwanye. Ndị a bụ ụdị ajụjụ ị kwesịrị ịjụ mgbe ịnwe ụlọ ọrụ iji mepee ozi ederede ọzọ gị?
Research - you nwere nyocha niile na data niile dị mkpa maka infographic ahụ? Otu ihe atụ nke a bụ mgbe ị na-ebipụta akwụkwọ ọgụgụ ma ọ bụ akwụkwọ ọcha - nke a na-egosi na ị nwere nyocha niile ịchọrọ karịa itinye ego iji chọta data ahụ. Inwe data nke gi nwere ike ịchekwa oge - mana ọ naghị ezughị iji gbanwee ọnụahịa.
mbọn - Oge ụfọdụ anyị na-arụsi ọrụ ike iji gosipụta ihe nkọwapụta dịka ndị ahịa anyị, oge ndị ọzọ anyị na-arụ ọrụ iji gosipụta ha dị iche. Ọ bụrụ na ndị na - agụ akwụkwọ na - ahụ akara gị ebe niile, ị nwere ike ọ gaghị eru atụmanya ọhụụ ma ọ bụ nweta ọtụtụ ịkekọrịta ozi gị. Ọ nwere ike ịpụta ka ọ na - echekwa ọfụma ma ọ bụrụ na - enyeghị ihe ọmụma. N'ezie, ọ bụrụ na ị bụ akara ọhụụ, ọ nwere ike ịbụ nnukwu ụzọ iji malite ịmalite njirimara gị! Nọgide na-enwe ụkpụrụ akara ngosi nwere ike ịkwalite ọnụahịa nke ọrụ imepụta.
usoro iheomume - Imirikiti infographics anyị chọrọ ọrụ izu ole na ole, site na ịhazi site na mmepụta, iji hụ na ọ ga-aga nke ọma. N'ime eziokwu niile, anyị anaghị enye ndụmọdụ maka obere ma ọ bụrụ na ọtụtụ mbọ a ga-adị obere. Mgbe anyị mepụtara infographics site na ncha n'oge dị mkpirikpi, anyị ahụbeghị nsonaazụ dịka mgbe enyerela ha nlekọta na nlebara anya kwesịrị ha. Dị ka ọrụ ọ bụla, oge a kara aka na-akwụ ụgwọ.
Ndị na-ege ntị - Na Martech Zone, anyị nọ n'ọnọdụ dị oke mkpa iji kwalite ahịa anyị na ihe ọmụma metụtara ahịa anyị na ndị na-ege anyị ntị, nke bụ oke oke nwere ezigbo ụkwụ na ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ maka ịkwalite na nkwalite, anyị ga-ahapụrịrị ihe ọ ga-efu ma hapụ ya obodo anyị ma ọ ga-eme karịa atụmanya.
akụ - Ọrụ dị ukwuu na-abanye na infographics nke ndị ahịa anyị na anyị ekwenyeghi na anyị kwesịrị ijide faịlụ ndị mechara emecha. Anyị ga-emepụta ma ngosi ma ọ bụ PDF mbipute yana ntanetị kachasị mma maka ndị ahịa anyị. Anyị ka na-enyefe ha faịlụ ahụ, agbanyeghị, ka ndị otu ọrịre ha wee nwee ike iwebata ma weghachite eserese ahụ na ozi ahụ na usoro ntụkwasị ọzọ ekesara. Nke ahụ na-eme ka nloghachi na ntinye ego dịwanye mma.
ndenye aha - Otu infographic nwere ike inwe mmetụta dị egwu maka ụlọ ọrụ. Agbanyeghị, enwere ike ịmụ ihe dị ukwuu na imepụta akwụkwọ ozi izizi enwere ike iji mee ka ọ dịkwuo mma iji nweta ozi eserese n'ọdịnihu. Nakwa, ọ bụrụ na enwere ike ịhazi nchịkọta infographics n'otu aka ahụ, enwere ọnụọgụ ego n'okporo ụzọ. Anyị na-akwado nke ukwuu ịbanye ndị ahịa maka opekata mpe ihe ngosi 4 - otu n'ime nkeji iri na ise wee lelee otu ha si eme ọnwa ndị edechara akwụkwọ.
Promotion - Infographics bụ ihe ịtụnanya, mana ịme ka ele ha anya site na mgbasa ozi akwụ ụgwọ ka bụ nnukwu ụzọ ịga. Anyị na-enye ezigbo nkwalite nke infographics nke ndị ahịa anyị site na nyiwe dịka Mgbasa ozi StumbleUpon. N'adịghị ka ụdị ọdịnaya, ọ chọghị mkpọsa na-aga n'ihu. Mgbasa ozi mmeghe iji bulie ọhụhụ izizi nwere ike zuru ezu iji kesaa ma bipụtara ya na saịtị dị oke mkpa na ịntanetị.
Mwepu - Ọ bụrụ n’inwe ndị otu mmekọrịta mmekọrịta ọha na eze ma ọ bụ ndị ọrụ mmekọrịta ọha na eze na - arụ ọrụ na gị, Infographics bụ ihe ịtụnanya ịtụnye ndị na - ekwu okwu na mbipụta ha. Typesdị ọrụ ndị a nwere ike ịba okpukpu abụọ nke akwụkwọ ozi, agbanyeghị, yabụ ị ga-achọ ịtụle ma ịkwesịrị ịbawanye nlele (dịka na ọdịnaya oge) ma ọ bụ gaa maka usoro dabere na ngwa ngwa karịa ogologo oge ebe achọtara ya organically.
Ego Ole Ka Infographic Na-efu?
Maka otu infographic, anyị na-akwụ ụgwọ atụmatụ nke $ 5,000 (US) nke gụnyere nkwalite (ọ bụghị ntinye) ma weghachite ndị ahịa anyị akụ niile. Ihe omuma ihe omuma nke uzo ato gha eme ka ihe omuma nke ihe ruru $ 4,000. Ihe omuma ihe omuma kwa ọnwa na-efu ihe ruru $ 3,000 n'ihi arụmọrụ nke anyị nwere ike iwulite n'ime usoro ahụ. Biko egbula oge ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ nkwupụta - ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite!
[igbe ụdị = ”ihe ịga nke ọma” mmezi = ”aligncenter” klas = ”” obosara = ”90%”] Kwuo isiokwu a mgbe ị kpọtụrụ ụlọ ọrụ anyị anyị ga-ewepụ ihe ọmụma mbụ gị site na $ 1,000. Ma ọ bụ jiri "infographics2016" mgbe na ntanetị. [/ igbe]
Anyị nwekwara ọnụahịa ụlọ ọrụ ebe anyị mepụtara infographics maka ụlọ ọrụ ndị ọzọ - ma mmekọrịta ọhaneze na imewe. Kpọtụrụ m maka nkọwa.
Ihe omuma ihe omuma bu ihe anwansi anwansi. Infographics nwere ike inye ma data ma ọ bụ nye aka kọwaa usoro dị mgbagwoju anya.
Mgbanwe - Infographics nwere ike ịchụgharị mgbanwe site na ịmara ụba na ikike.
Sales - Ọtụtụ ndị ahịa anyị na ndị na-apụ apụ na ndị na-apụ apụ na-eji infographics zụlite ma soro atụmanya. Ha na-eme nnukwu ahịa nkwa.
Ịkekọrịta - Infographics nwere ike gbasaa n'ụzọ zuru oke ma wuo njirimara na ikike ịntanetị.
Social - Infographics bu ihe di egwu nke ndi mmadu na-akpo nke oma na ihe omuma nke ndi mmadu (tinyere ihe n’eme ha ma meputa vidiyo n’ime ha).
Search Organic - Infographics ndị a na-ebipụta na saịtị niile dị mkpa na-ebugharị njikọ na ikike dị elu maka ndị ahịa na-etinye ha mgbe niile.
Evergreen - Infographics na-enye nke enwere ike iweghachite ọnwa karịa ọnwa na oge ụfọdụ afọ karịa afọ.
Nloghachi na itinye ego na Infographic anaghị atụ ụbọchị ma ọ bụ izu, a na-atụkarị ya na ọnwa na afọ. Anyị enweela ndị ahịa gwara anyị ọtụtụ afọ ka e mesịrị na ha ka bụ peeji ndị kachasị elu eleta na weebụsaịtị ha.
Lelee Pọtụfoliyo Anyị Tụ Infographic Ugbu a!
Tags: ego oleego ole ka infographics na-eriihe omuma iheihe omuma iheatụmatụ infographicihe ngosiInfographics Ahịankwa ahia